MCSE Certification - Zvose Zvaunoda Kuziva - ITS Tech School
MCSE Certification - Wose Unoda Kuziva
Chii chinonzi MCSE chinoreva?
Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) iri chirongwa chinogadzirirwa makombiyuta vashandi / vanjiniya vanoda kuwedzerwa mumatunhu e IT design, zvigadziriswe uye kuchengeteka. Chirongwa che MCSE chinomutsa kushandiswa kwekugadzirisa chetient ye unyanzvi hweT IT nokuvadzidzisa nekwanisi yekugadzira hurongwa hwekugadzirwa kwezvinhu uye nekuisa, kugadzirisa, kutungamirira uye kunetsa. Icho chiyeuchidzo chinoratidzawo kukwanisa kweanyanzvi kutamira matanho pamwe nemararamiro emangwana / zvigaro zvebhizimisi.
Ndiani anopa MCSE certification?
Sezvo zita racho rinoratidza zvakajeka, chiyeuchidzo ichi chinopiwa neMicrosoft. A Microsoft Certification inosimbisa unyanzvi hwemhizha mukushandiswa kwekombiyuta yeMicrosoft. Iyo MCSE chiyeuchidzo ndicho chinonyanya kuzivikanwa necheti yezvipupuriro zvinouya pasi peMicrosoft Certified Professional (MCP) yakave yakagadzirirwa kuvaka paanokwanisa kukwanisa kubatanidza zvakakwana michina yakasiyana-siyana yeMicrosoft uye zvakakwana mumamiriro ebhizimisi.
Chii chinangwa che MCSE?
Chinangwa chikuru chechikwata che MCSE ndechokugonesa kukwirira kwekodzero yekodzero uye unyanzvi hwevadzidzi. Vadzidzi vanoziva unyanzvi hunodiwa
Vakai mazano emakore ekugadzirisa;
Runzai yakanyatsoshanda uye yemazuva ano yedata rekushandisa;
Kugadzira, kushandura & kushungurudza zvose zvivakoti kana zvikamu zvayo;
Shandisai data, maitiro & chimiro chake;
Mabasa ane chokuita ne Networking.
Ndeipi chirongwa chekufanirwa kuonekwa nekuda kwechiratidzo che MCSE?
Kuonekwa mumuedzo we MCSE, vasarudzo vanofanira kunge vane MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) chiyeuchidzo.
Inguva yakareba yei?
Zvichienderana nezvasarudzwa ma modules, iyo urefu urefu hunogona kusiyana kubva pamwedzi we2 kusvika kumwedzi 6.
Maitiro edzidziso yeC MCSE:
Iwe unogona kuva neCSSE mune zvese zvinotaurwa. Chikamu chimwe nechimwe chine zvinyorwa zvadzo zvekushandisa zvakanyorwa pasi apa:
Mobility -Microsoft Intune, Azure Active Directory, Azure Rights Management, System Center Configuration Manager, Windows System Center
Cloud Platform uye Infrastructure -Windows Server Virtualization uye Microsoft Azure
Kubudirira -Microsoft Office 365, Microsoft Office Exchange, Skype yeBusiness & SharePoint
Data Management uye Analytics -SQL server
Business Applications -Microsoft Dynamics 365, SQL Server
Chii chinonzi MCSE recertification- nei zvichidikanwa?
Iko yeMicrosoft certification inoramba ichikosha uye inoshanda chero bedzi makambani ari kushandisa teknolojia inoiswa pasi pechirongwa. Penguva yakati, zvitukuro zvinotora basa uye dzinotora nhaka. Microsoft yakavandudza mitemo yavo yekudzorera iyo inoda vese vadzidzisi ve IT kuti vatsandise mavoti avo e MCSE kuti varambe vachiri kuitika sezvo shanduro itsva dzekugadzirwa kwekombiyuta dzinosunungurwa nenguva nenguva. Nguva nenguva, apo magetsi matsva uye miedzo yavo inotangwa ne Microsoft, Vadzidzisi vanofanirwawo kuvandudza unyanzvi hwavo uye ruzivo kuburikidza nokutora miedzo iyi.
Iwe unoda zvakadini kuti urege kuongorora?
Chirongwa che MCSE chiyeuchidzo chakagadzirirwa kutonga zvose zviri zviviri uye unyanzvi hwekutsvaga mune zvekombiji. Iwe unoda kuisa 70% kuti ubvise kuongorora kweMicrosoft. Kuwana chikamu chemazana muzana inokosha. Kana munhu akawana huwandu huwandu mune imwe nyanzvi yekugadzirisa uye pasi shoma mune rimwe ruzivo rwakagadziridzwa, zvinogona kutungamirira kuZIVA. Saka, kugadzirira kwese kwakakosha. Uyewo, zivo inoshanda pane kungoziva kudzidzira kuchawana mhinduro inoda.
Mari yacho inodhura zvakadini?
Kuti uwane chivimbiso che MCSE, munhu anoda kujekesa mhinduro nomwe. Kuonekwa kwekuongorora imwe neimwe kunodhura anenge Rs. 8000. Izvo zvinowedzera mari dzinosanganisira zvidzidzo zvekudzidza uye zvidzidzo zvekudzidza izvo vatsva vanoda kubhadhara.
Munhu akanganisa angasarudza kuzvidzidza oga achibatsirwa kubva kuMicrosoft Training Centers kana kuti angabatana nechikoro chinoratidzirwa uye anowana rubatsiro mukugadzirira zvidzidzo nenzira yakarongeka.
Zvakakosha kutaura, zvisinei, kuti nguva yakareba yemari inobatsira yekuwana ichi chiziviso ichiri nani kudarika mari inowanikwa.
Nguva yenguva yekuongorora
Chirwere che MCSE chinofanira kupedzerwa mumaminitsi e150. Zvisinei, kune avo vanoita mutauro wavo wekuzvarwa kwete Chirungu asi vakasarudza kutora muongorori muchiChirungu, nguva yakareba inogona kupiwa.
Munyika dzakawanda, kune Peveson VUE nharaunda, apo vatsva vanogona kutora miedzo iyi. Kana vakatsvaga vakasarudza kupinda muchikwata chekudzidzira chidzidzo, chinogona kunge chine zvivako zvayo uye zvikamu zvayo kuti zvibatsire avo vanobhabhatidzwa mukunyora uye kuonekwa kune ma modules akasiyana-siyana edzidziso.
Sei MCSE Certification ingashandiswa?
Zvave zvichizadzisa zvinokodzera kugadziriswa, MCSE chiyeuchidzo ups kushandiswa kwevadzidzi kuburikidza nekusimbisa unyanzvi hwavo hwehutano uye hwemhizha. Vanokodzera mabasa semushandi wekombiyuta nyanzvi uye nyanzvi yekuongorora nyanzvi. Chirongwa chinogadzirira mudzidzisi ane unyanzvi hwakawanda hune chokuita nekugadzira, kushandiswa nekugadzirisa teknolojia yekushandiswa kwekushandisa uchishandisa maSpirate mapuratifomu.
Munhu anonzi MCSE Anozivikanwa anokwanisa kusarudza basa kubva pakati peminda iri pasi apa inotaurwa:
System Analyst, uye
Ramangwana revadzidzi vanozviratidza kuongororwa kweCMS certification
Mamwe masangano anosanganisira mazita ose akanyorwa pasi pose anoshandisa michina yeMicrosoft uye achitsvaga vanhu vane mazano anonzi MCSE. Unyanzvi uye ruzivo rwakagadzirirwa kubva pakudzidza izvi zvinogona kushandiswa kune zvakasiyana-siyana zveI IT mukati me sangano uye naizvozvo unyanzvi angasarudza nzvimbo yake yekufarira mukati mekusangano. Mibairo yakakwirira inoswededzwa nevadzidzisi vane unyanzvi hwakanaka hwakagadzirirwa uye ichi ndicho chimwe chezvinhu zvinoshandiswa pakuchenesa. Kana mukoti wechikwata ichi kutsigirwa neBachelors degree muComputer Sciences, hapana muganhu wekukura iyo unyanzvi hweCSSE unozivikanwa unogona kupupurira.
PMP Akapupurirwa Professional Interview Mibvunzo
CCNA Certified Professionals - Mubvunzurudzo Mibvunzo Nemhinduro
A Complete Guide ku MCSA 2016 Certification
Ruregerero rweMicrosoft Software Assurance (SA) Kudzidzisa Mabhodhi